यी हुन् परीक्षामा पास गराइदिने लालच दिएर यौ’न सम्बन्ध राख्न लगाउने शिक्षिका ! – " सुलभ खबर "
यी हुन् परीक्षामा पास गराइदिने लालच दिएर यौ’न सम्बन्ध राख्न लगाउने शिक्षिका !
काठमाडौं । के हुन्छ जब शिक्षक वा शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई परीक्षामा पास हुनको लागि आफुसाग यौ नसम्बन्ध राख्न अनुरोध गर्छन ? यस्तै, सनसनीपुर्ण काण्ड बजारमा आएको छ । यस घटनामा संलग्न महिला कलेजकी प्राध्यापकलाई मद्रास उच्च अदालतले प,क्रा,उ गरेको ११ महिना पछि उनीलाई सशर्त जमानत दिएको छ । न्यायाधीश एन किरुबाकरण र मदुरै पीठका एसएस सुन्दरले निलम्बित सहायक प्राध्यापक निर्मला
देवीलाई जमानत दिएका हुन् ।प्रोफेसरमाथि आ,रो,प छ कि उनले मदुरै कामराज विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेर महिला विद्यार्थीहरूलाई राम्रो अंक ल्याएर पास गराइदिने लालच दिने गर्थिन । सरकारी वकिलले अदालतमा भने कि उनलाई जमानत दिदाँ कुनै आपत्ति छैन ।
विद्यार्थीसँग प्राध्यापकको कुराकानीको अडियो भाइरल भए पछि कलेज र महिला फोरमको गुनासोमा उनका विरुद्ध कारबाही गरियो । अडियो क्लिपमा, प्रोफेसरले कथित रूपमा विद्यार्थीहरूलाई केही अधिकारीहरूसँग यौ नसम्बन्ध राख्न सल्लाह दिइरहेका सुन्न सकिन्छ प,क्रा,उ गर्नु भन्दा पहिले कलेजले आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि प्राध्यापकलाई निलम्बन गरेको थियो । अडियो फेला परेपछि जब विवाद बढ्यो तब यो विवाद राज्यको सीआईडीलाई हस्तान्तरण गरियो ।